Ansu Fati oo fagaaraha ku ceebeystay qaar ka mid ah Weeraryahannada Kooxda Real Madrid – Gool FM
Ansu Fati oo fagaaraha ku ceebeystay qaar ka mid ah Weeraryahannada Kooxda Real Madrid
(Barcelona) 04 Feb 2020. Ansu Fati ayaa noqotay xiddigii ugu da’da yaraa ee labo gool ka dhaliyay horyaalka La Ligaha Spain isbuucaan.
Labdii Gool ee uu Ansu Fati ka dhaliyay Kooxda Levante kulankii Axaddii ma ahayn oo kaliya inuu guul ka saaciday Barcelona, laakiin sidoo kale wuxuu dhigay rikoor kale kaddib markii uu noqday ciyaaryahanka ugu da’da yar ee labo gool ka dhaliya horyaalka Spain, isagoo jira 17 sano iyo 95 maalmood.
Ansu Fati ayaa markale ka faa’iidaystay fursaddii uu siiyay macallinka cusub ee Barcelona, Quique Setien ka hor soo laabashada Ousmane Dembele oo markale la xaqiijiyay inuu dhawac ku soo gaaray tababarka.
Isbarbardhigga rikoorka gooldhalinta Ansu ee xilli ciyaareedkaan iyo ciyaartoyda kale ee da’yarta La Liga oo ay ku jiraan saddexda xiddig ee kasoo iftiimaya Kooxda Real Madrid ayaa 17 jirkan siinaysa astaan kale oo mustaqbalkiisa dahab ka dhigaysa.
Waxa uu dhaliyay afar gool oo horyaalka ah kaliya 582 daqiiqo oo uu ciyaaray, taasoo la mid ah isku darka wadarta guud ee Vinicius Jr, Rodrygo iyo Luka Jovic kuwaasoo wadar ahaan iyaguna dhaliyay afar gool.
Waa kuwan tirakoobyada iyo isbarbardhiga Ansu Fati iyo saddexda weeraryahan ee u soo baxaya Real Madrid:-
Ansu Fati: 4 gool, 13 kulan, 582 daqiiqo
Vinicius: 1 gool, 18 kulan, 672 daqiiqo
Rodrygo: 2 gool, 16 kulan, 666 daqiiqo
Jovic: 1 gool, 21 kulan 389, daqiiqo